ပြည်သူချစ် သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦးရဲ့ မိခင်ကြီး မွေးနေ့ဖစ်ကြောင်း……….. – Shwe Naung
ပြည်သူချစ် သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦးရဲ့ မိခင်ကြီး မွေးနေ့ဖစ်ကြောင်း………..
N N | September 20, 2021 | Celebrity | No Comments
ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးက တော့ပြည်သူနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကရပ်တည် ပေးခဲ့တာကြောင့် မတရားဖမ်း ဆီးခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ကတော့ ပြေတီဦးရဲ့ မိခင်ကြီး မွေးနေ့လေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ကြီးရဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ အရင်လိုမိသားစု စုံစုံလင်လင်မ ရှိတာကြောင့်ပြေတီဦး ညီမလေးကအခုလို ပြောပြလာပါတယ်။
ဒီနေ့ချစ်ရသောမေမေ့မွေးနေ့ အရင်နှစ်တွေကတော့ နှစ်တိုင်းမိသားစု စုံစုံလင်လင်နဲ့အလှုတွေ လုပ်ရင်းကျော်ဖြတ်နေကြပေါ့။
ဒီနှစ်တော့သားတွေသမီးတွေအနားမှာမရှိနိုင်ပေမယ့် မေမေကတော့ရိုးရာ မပြတ်အလှု လုပ်ပါတယ်။
သားနဲ့ သမီးချွေးမရှိရာနေရာမှာ နေ့လည်စာဒါနပြုရင်းပေါ့။သမီးငယ် ကညကဆေးရုံစောင့် ရမယ်မေမေလို့ ပြောတော့သားလေ းဉာဏ်ဉာဏ်ကိုသေချာဂရုစိုက်လိုက်နော်တဲ့မှာရှာတယ်။မေမေဟာသူ့သားမက်လေးကိုတော်တော်ချစ်ရှာတယ်။
သားမက်လို့သဘောမထားဘဲ သားအငယ်ဆုံးလေးလို့သဘောထားတယ်။ နေမကောင်း လို့ဆေးရုံတက်ရ တော့ လည်းမျက်နှာပျက်ပျက်နဲ့ တအားဝမ်းနည်း နေတော့သမီးကပြန်အားပေးနေရတယ် ဉာဏ်ကလေ မေမေ့ကိုသိပ်ဂရုစိုက်တာ သူတခုခုဖြစ်မှာမေမေမခံနိုင်ဘူးတဲ့
သမီးနှစ်ယောက်အပေါ်အရမ်းကောင်းလို့ သူ့သမီးနှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက် တွေအပေါ်သားများ ကဲ့သို့ချစ်ရှာသလို ချွေးမကိုလည်းသမီးကဲ့ သို့ချစ်ရှာတယ်။
သားနဲ့ချွေးမ ကြပြန်တော့လည်းသား အတွက်စိတ်မကောင် းဖြစ်ပေမယ့်ချွေးမလေးခံနိုင်ရည်မရှိမှာကို ပိုပီးပူပင်သောက ရောက်ရသူသား သမီးချွေးမသားမက် ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ အကုန်လုံးအပေါ် တာဝန်ကျေသော လူတိုင်းအပေါ် မေတ္တာထားနိုင်သေ ာအမုန်းရန်ငြိုး မရှိသောခွင့်လွှတ် တတ်သောလောဘ
ဒေါသမာန်မာန နည်းသောမေမေလူချစ်လူခင်ပေါများသောမေမေသမီးနှစ်ယောက် ထက်ပို ချောသော မေမေသမီးက ဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းဝိပဿနာကို ကြိုးစားအားထုတ်ပေးတဲ့
မေမေအသက်ရှည်စွာအနာမဲ့ပြီးလွယ်ကူသောခန္ဓာဝန် ကိုထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းဖြင့် လောကီလောကုတ် ကောင်းကြိုးအတွက် ဆက်လက်ပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ
မေမေချစ်တဲ့သားသမီးတွေနဲ့လဲအမြန်ဆုံးပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင်ပြန်နေနိုင် ပါစေလို့ သမီးဆုတောင်း ပေးပါ တယ်ေ မမေချစ် တယ်နော်HAPPY BIRTHDAY MY BELOVED MOM
သူမရဲ့ အမိုက်စား ကိုယ်လုံးလေးကို ပရိသတ်တွေ မြင်သာအောင် ချပြလိုက်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ရွှေပိုးအိမ်ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ……….
မိခင် ဖြစ်သူက ပရိတ်သက်တွေကို ပြောပြလာတဲ့ ဒီကနေ့မှာ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာတဲ့ သမီးဖြစ်သူ အေသင်ချိုဆွေရဲ့ အကြောင်း….
ဆက်ဆီကျကျ လှပနေတဲ့ အမိုက်စား ကိုယ်လုံးလေးကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး………
အမိုက်စား ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နှင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ လှပနေတဲ့ အိချောပိုရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး………..
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ရွှေမဘုံရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး……….
ရင်ဖိုစရာ ကောက်ကြောင်းအလှအပတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်အားပြင်းပြင်း ညို့ယူဖမ်းစား ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် နန်းမွေစံရဲ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ………
အတွင်းသား လှလှလေးကို ပရိသတ်တွေ မြင်သာအောင် ချပြလိုက်တဲ့ ခင်သဇင်ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး………
သူမရဲ့ အမိုက်စား ကိုယ်လုံးလေးကို အထာကျကျ လှုပ်ခါ ကပြထားတဲ့ ခြူးလေးရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး……….
ကိတ်လွန်းလှတဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ကိုယ်လုံးလေးကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ ရွှေပိုးအိမ်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ………
အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးနဲ့ အမိုက်စား ပိုစ့်ဆန်ဆန်လေး ပေး‌ကာ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာရဲ့ အလှ ပုံလေးများ………
Copyright © 2022 Shwe Naung .